यसरी लुटियौं एकसाथ जोइपोइ « Sansar News
यसरी लुटियौं एकसाथ जोइपोइ
१० पुष २०७३, आईतवार १०:५०
ह्या तिमि पनि कता राख्छ्यौ भन्दै उहाँले फोन दबाउनु भयो ।
‘फोन त स्वीच अफ छ कहाँ खसाल्यौ मोबाइल ? उहाँले सोध्नु भयो । ‘खसालेको होइन अघि बस चढ्ने बेलामा समय हेरेर ब्यागमै राखेको हुँ ’ मैले उत्तर दिएँ । कतै बसेको सिटमै त खसेन भनेर उहाँले मोबाइलको उज्यालोले हेर्नुभयो । भेटिएन । मैले त्यत्तिबेलै ब्यागमा भएका सबै सामान बाहिर निकालेर खोजी गरें तर पनि पाइन । सायय गाडी चढ्ने क्रममै हाम्रो सामान लुटिसकेको थियो ।
पुष ८ गते शुक्रबार । अफिसबाट (कमलपोखरी)ठीक ५ः १५ निस्किँए । अँध्यारो हुन लागिसकेको थियो । अफिसबाट निस्केपछि म शन्देश जी (श्रीमान) को अफिस पुग्थें बागबजार । अनि सँगै जाने गथ्र्यौं दुवैजना । सोही दिन पनि म बागबजार पुगेँ । त्यहाँ पुग्दा ५ः ३० भइसकेको थियो । उहाँको थोरै काम बाँकी रहेकाले हामी त्यहाँबाट ५ः५० मा बाटो लाग्यौं । गाडी चढ्ने स्टेशन भृकुटी मण्डप । रुट नम्बर २३ । गाडी नआएको धेरै समय भएको रहेछ । मानिसहरु आत्तिरहेका थिए । हामी पुग्दा एउटा बस रोकिएको रहेछ । त्यहाँ यात्रुहरुले भरिसकेका रहेछन् । लामो दूरीको बाटोमा उभिएन जान नसक्ने भएकाले हामीले अर्काे बस कुर्ने निर्णय ग¥यौं र भीडभन्दा अलि परको रेलिङमा गएर बस्यौं । त्यति बेलै देश विकास साप्ताहिकका पत्रकार नारायण पौडेल पनि आउनु भयो । शन्देश जी र नारायण जी सँगै रेलिङमा बसेर कुरा गर्न थाल्नुभयो । म भने बस कति खेर आउला भनेर बाटोतिर आँखा तन्काउन थालें ।
त्यत्तिबेला मेरो ध्यान मोबाइलमा गयो । ब्यागबाट मोबाइल निकाले । समय हेरें ६ बजेर ६ मिनेट गएको रहेछ । मोबाइल हेर्दै गर्दा एउटा बस आयो । दगुर्दै हामी त्यतातिर लाग्यौं । कन्डक्टर कराउँदै थिए लैनचौर, सोह्रखुट्टे, बालाजु, बाइपास । मैले सोधें ‘ शेषमति जान्छ ? के को शेषमति ? कन्डक्टरले रुखो स्वरमा बोल्यो । जान्छ कि जाँँदैन भाइ ? मैले दोहो¥याएर सोधें । खँलासी नबोली फेरि कराउन थाल्यो बालाजु बाइपास…। जे सुकै होस् जहाँ सम्म जान्छ त्यही जाने भनेर हामी दुवै चढ्यौं । नारायण जी को भने फुटुङ जानुपर्ने भएकाले उहाँ चढ्नु भएन ।
सिट भरिएपछि बस गुड्यो । आरएनएसी पुग्दा झण्डै साँढे ६ हुन लागेको थियो । साँढे ६ को कान्तिपुर डायरी सुन्न भनेर ब्यागबाट एयरफोन निकाले । ब्यागको पछिल्लो गोजीमा मोबाइल राखेको थिएँ । त्यहाँबाट मोबाइल झिक्न खोज्दा मोबाइल रहेनछ । खोजीको चेन खुल्लै ।
मैले शन्देश जी लाई आत्तिँदै भने ‘लौन मोबाइल कता पुगेछ, मिसकल गर्नु त ?’ ह्या तिमि पनि कता राख्छ्यौ भन्दै उहाँले फोन दबाउनु भयो ।
सामसुङको एन्ड्रोइड मोबाइल भएकाले प्रहरीले फेला पार्न सक्छन् कि भनेर १०० मा फोन गर्नुभयो शन्देशजीले । प्रहरीले आइएमइ नम्बर छ भने मात्र पत्ता लाग्छ भने । मैले आइएमइ नम्बर राखेको थिइन । त्यसो भए पछि मोबाइल अब नपाउने पक्का भयो ।
मन खिन्न भयो । शन्देशजीले आफ्नो सामान सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जति जे पनि भने हराउनु हराइ नै सक्यो । केही बोलिन आफ्नै कमजोरी थियो । यदि मोबाइल ब्यागको भित्रपट्टि राखेको भए त चोरले चोर्न सक्दैनथ्यो होला नी ।
बस बाइपास पुग्यो । बाइपास सम्म मात्र भए पनि जाने भनेर चढेका थियौं हामी । तर बस नेपालटारतिर हाँक्कियो । नेपालटार पुगेपछि कन्डक्टर भाडा उठाउँदै आयो । शन्देशजीले भाडा दिन पर्स निकाल्न खोज्दा उहाँको पर्स पनि रहेनछ । अनि भन्नु भयो ‘तिमिलाई त आफ्नो सामानको सुरक्षा आफैं गर्नुपर्छ भनें तर मेरो पनि सामान छैन ।’ म अवाक् भएं । हैन के भएको यस्तो ? मैले नपत्याए जस्तो गरेर हेरें ‘साँच्ची भनेको मेरो पर्स छैन । ’कन्डक्टर आएपछि मैले मेरो ब्यागबाट भाडा झिकेर दिएँ ।
उहाँको पर्समा महत्वपूर्ण कागजपत्र र मेरो मोबाइलमा महत्वपूर्ण फोन नम्बर । सबै हरायो । कसलाई के भन्ने ? कसलाई सोध्ने पक्कै चोर बसमा थिएन । यसैले हामी चुपचाप बस्यौं । बस शेषमतिमा रोकियो । खिन्न मन लिएर हामी झ¥यौं । मोबाइल त हरायो हरायो पर्स पनि सँगै चोरी भयो कस्तो विडम्बना ! एकैदिन एकैसमयमा दुवै जनाको सामान हराउनु दुर्भाग्य नै थियो । जे होस् यो चोरीले पाठ सिकाएको छ । आफ्नो सामानको सुरक्षा गर्ने । भृकुटीमण्डप, आरएनएसी र जमलमा हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्ने छ । कतै हुलमुलमा चोरले हामीमाथि नै आँखा त गाडीरहेको छैन । त्यसैले सजग होऔं, सामान सुरक्षित राखौं । लुटिनबाट बचौं ।